04 alina / 05 Andro
Rehefa tonga any amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Dubai ianao, dia hoentina any amin'ny hotely misy anao ny solontenanay.
Mankanesa ao amin'ny hotely, miala sasatra ary mandany ny andro sisa iainana amin'ny fialan-tsasatra.
Mialà ao amin'ny hotely ny hariva ary jereo ny tranombarotra. Raha te hanana traikefa an'i Emirati marina ianao, tsidiho ny iray amin'ireo sarobidy ao Bur Dubai. Eo koa ny manodidina ny Trano Bastakia manan-tantara izay malaza amin'ny tranon'ireo tranokala mahazatra sy tilikambo.
Andraikitra any amin'ny trano fisakafoanana indiana
Aorian'ny sakafo matsiro dia hivezivezy mandritra ny iray andro fitsidihana ny tanàna ianao. Ny fitsidihana dia mitondra anao any amin'ny tsenan'i Bur Dubai Creek, Spice. Azonao atao ny mijanona amin'ny sary amin'ny fijanonana miaraka amin'ny Burj al-Arab, ilay hotely kintana 7 irery ihany. Avy eto ianao dia miposaka mankany amin'ilay lehilahy nanao ny Palm Island sy ny voninahiny ambony, ny Atlantis ny Palm Hotel. Ny teboka avo amin'ny fitsangatsanganana dia ny mozika Jumeirah fotsy tsy misy fotony. Mariho tsara fa tsy tokony hanao akanjo ianao, ny ratra ary ny fitaovam-piadiana dia tokony hodinihina ary ny vehivavy dia mila manarona ny lohany amin'ny saripika. Amin'ity fitsangatsanganana ity ianao dia hitsidika trano fahiny arabo miaraka amin'ny rafitra nentim-paharazana.
Ny takarivanao dia handeha ho an'ny Dhow an-dalamby ao Dubai Creek. Ireo marika nentim-paharazana Arabo nentim-paharazana izay nijanona tsy niova nandritra ny taonjato maro. Ny fitsangatsanganana dia manolotra fomba fijery tena hafa amin'i Dubai. Amin'ny lafiny iray dia Deira, izay, noho ny tanjona azo trandrahana, ny tanànan'i Dubai mandrapahatongan'ny 1990. Etsy andaniny dia ny Dubai maoderina miaraka amin'ireo lalana malalany sy ireo trano avo lehibe indrindra. Ny dinner (buffet) dia ho eo amin'ny birao dhow.
Manàna sakafo matsiro izay azonao atao ny miala sasatra ao amin'ny trano fandraisam-bahiny rehefa miala voly ianao amin'ny maraina.
Ny tolakandro dia manomboka ny Desert Safari ianao. Nalefa tany an'efitra ianao. Mipetraha ary mankafy ny fomba fiakaran'ny fiara eny amin'ny dongom-pasika. Dune-bashing, raha tianao! Diniho ny masoandro midina amin'ny faravodilanitra avy eo amin'ny tendrony avo indrindra. Ny filentehan'ny oran-dranomasina koa dia mahatonga ny saribakoly lavorary ho an'ny sary maro tsy hay hadinoina. Raha toa toa toa maoderina loatra ny fiara misy anao, dia makà rameva. Azonao atao ihany koa ny miala amin'ny toerana misy ny design henna sy sheesha. Hisakafo an-dabozia arabikanina ny sakafo hariva, raha misy mpandihy vantany mampihetsi-po anao amin'ny hetsi-panoherany. Rehefa tapitra ny hariva mahafinaritra, dia nentina niverina tany amin'ny hotely ianao
Androany, aorian'ny sakafo maraina dia manana ny andro sisa iainana amin'ny fialan-tsasatra ianao.
Na izany aza, manoro hevitra izahay fa haka ity fotoana ity hitsidihana an'i Burj Khalifa, tranobe avo indrindra eto amin'izao tontolo izao. Miantso azy io ho mahatalanjona na manambany, tsy misy mandà fa ny Burj Khalifa dia sehatra ara-panatanjahan-tena sy rafitra. Ny tranobe avo indrindra eran-tany dia manindrona ny lanitra amin'ny 828m (avo fito heny ny Big Ben) ary nisokatra tamin'ny 4 Janoary 2010, enin-taona monja taorian'ny nanombohan'ny fikarohana. Hatramin'ny mpiasan'ny 13,000 no nogadraina andro aman'alina, indraindray dia nanamboatra efitrano vaovao tao anatin'ny telo andro. Ny tena mahasarika indrindra dia ny Departemantan'ny "Observation de la Top" eo amin'ny ety 124. Amin'ireny havoana avo be ireny ianao dia afaka mamaritra tsara an'ity Tontolo ity, ireo fivoarana Palm telo sy ireo mari-pamantarana hafa. Ny fandehananao dia mitondra anao amin'ny fampisehoana multimedia samihafa amin'ny fiakaran-drakitra roa-drakitra izay mamoha anao 10m isan-tsegondra mandritra ny iray minitra mba hahatratra ny haavony 124 amin'ny avo 442m ambony eny amin'ny rivotra. Amin'ny fiafaran'ny fitsidihana, miverena any amin'ny hotely misy anao
Taorian'ny sakafo maraina, mialà amin'ny hotely. Halefa any amin'ny seranam-piaramanidina ianao handefa ny sidina ho any an-trano.
Fiaramanidina mitodika any Indigo
4 alina / andro fialan-tsasatra andro
Sakafo maraina sy misakafo isan'andro
Vola avy amin'ny Visa UAE
Ok mba hiakatra fiampangana
Miverena any amin'ny seranam-piaramanidina